Maitiro ekushandura TV kuita choto (vhidhiyo uye app) ulator Emulator.online ▷ 🥇
Iko hakuna chero senge sekunyaradza kwakanyarara kwemoto unotinhira, asi havazi vese vanogona kuunakirwa zviri nyore. Kunyanya mumaguta, nzvimbo yemoto iri mumba haina kujairika, uye kunyangwe avo vanayo vanogona kunge vasina nguva kana mukana wekugadzira huni. Chero zvazvingaitika, zvinogoneka tevedzera kuvepo kwechoto mumba uye kugadzira iyo "chaiyo" nzvimbo yemoto inova yakakwana kwete chete yekuzorora husiku, asiwo panguva yekudya kwemanheru neshamwari kana mhuri, sezvaungaita paKisimusi kana humwe husiku hwechando.
Unogona shandura TV yako ive chairo chimoto, mahara, munzira dzinoverengeka dzakapusa uye dzinoshanda, dzinoendesa ku ona moto unoputika unopfura mududziro yepamusoro, zvizere ne ruzha rwehuni dzinopfuta.
VERENGA ZVIMWE: Iwo akanaka kwazvo echando mapikicha ePC nechando nechando
Ini ndinofamba yake Netflix
Nzira yekutanga yekushandura terevhizheni yako kuva choto uye zvakareruka pazvose kutamba vhidhiyo yenzvimbo inopisa yemoto. Izvi zvinogona kuitwa kubva kuYouTube kana, zvirinani, kubva kuNetflix. Zvinoshamisa kutarisa mugwagwa O Musha yako Netflix, iwe unogona kuwana yakanyatsoita imwe awa mavhidhiyo.
Kunyanya, iwe unogona kutanga anotevera mavhidhiyo paNetflix:
Moto wemba yako
Classic fireplace yeimba
Crackling Imba Choto (Birch)
Ini ndinofamba yako Youtube
PaYouTube unogona kuwana zvese uye hapana kushomeka kwemavhidhiyo marefu kuti uone moto unopfuta uye unotinhira paTV. Chiteshi "Fireplace yeimba yako" chine mapfupi mavhidhiyo eNetflix mavhidhiyo, iwe uchitsvaga iyo Camino kana "Fireplace" paYouTube unogona kuwana mavhidhiyo emaawa masere kana kupfuura zvichienderera izvo zvaunogona kutanga zvakananga kubva pano:
4K chaiyo-nguva fireplace kwemaawa matatu
Firefire kwemaawa gumi
Krisimasi nzvimbo yemoto nzvimbo 6 maminera
Nzvimbo yemoto yeKisimusi 8 ore
VERENGA ZVIMWE: Maitiro ekuona mavhidhiyo eYouTube paTV yako yekumba
Kushanda kwekutarisa choto pane Smart TV
Zvichienderana nerudzi rweSmart TV yauri kushandisa, unogona kuisa yemahara kunyorera nekutsvaga izwi reMoto muApp Store. Pakati pezvakanakisa zvandakawana, tinogona kunongedzera:
Fireplace app yeAppad kana Apple TV
Nzvimbo yechando yechando
Kutanga kutonga choto
Nzvimbo inonakidza yemoto
Kunyorera kweiyo Android TV / Google TV Fireplace
Blaze - 4K Virtual Moto
HD chaiyo nzvimbo yemoto
Amazon Fire TV Fireplace app
Nzvimbo yehuni chena
HD IAP chaiyo nzvimbo yemoto
Chromecast fireplace app
Chromecast zvishandiso (izvo zvisiri Google TV), hazvina mashandisirwo ekuona nzvimbo yemoto, uye sarudzo yekuisa fireware screensaver nemoto yakanyangarika (yaivepo paGoogle Music). Nekudaro, iwe unogona kutsvaga Chitoro kune maapplication ayo anogona kukanda vhidhiyo yemoto unopisa paChromecast yeiyo Android smartphone (seFireplace yeChromecast TV) kana ye iPhone (seFireplace yeChromecast). Iwe unogona zvakare kufambisa chero vhidhiyo yeYouTube uchishandisa yako smartphone kana komputa pane iyo Chromecast.
6 zvirongwa zvekugadzira bootable flash drive yeWindows, Linux uye macOS
Maitiro ekunzwisisa kana mumwe munhu akatisora ​​kubva kumaikorofoni (PC uye smartphone)